Mayelana NATHI - Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd.
Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd.itholakala eXuzhou, esifundazweni iJiangsu, ngokuhamba okulula kujantshi, onguthelawayeka kanye nezindiza. Inkampani yethu ingumkhiqizi okhethekile ohlanganisa ukuklanywa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kokuphilayo.
Inkampani yethu ikhiqiza futhi ithengise izingxenye ezahlukahlukene zamathangi, izingxenye ze-oilcan, izingxenye zezinqola zokunisela, i-aluminium kanye nensimbi engagqwali ukuhlangana okusheshayo, ama-valve wendlela ephindwe kabili, ama-valve wepetrochemical aphakathi nendawo aphansi, izingxenye zethangi elijwayelekile lokutholwa kwegesi laseYurophu, imikhiqizo yokutakula esiteshini segesi . Imikhiqizo yethu ihlinzekwa kabanzi ngezimboni ezifana nenkampani kaphethiloli, amasosha, amasheya kawoyela, iloli lamathangi, inqola yokunisela kanye negesi.
Inkampani yethu inikeza imikhiqizo ehlome kahle, amasu athuthukile, amandla amakhulu wezobuchwepheshe, futhi singenza ukwenziwa kwezinye izingxenye ezikhethekile.
Okunye ububanzi bebhizinisi
Inkampani yethu inokuhlangenwe nakho kobunjiniyela iminyaka, siphinde sazikhethekile ekufakweni kocingo lwesiteshi sikaphethiloli, ithangi likawoyela, ithangi le-asphalt, ithangi lokugcina iwayini, ipayipi nokwakhiwa kwesiteshi segesi, ukwakhiwa kabusha kokuvuselelwa kwesiteshi sikaphethiloli kanye, kabili, .
“Izinga eliphezulu, amanani aphansi nensizakalo eningi emva kokuthengisa” kungumgomo wethu, “Ukwaneliseka Kwamakhasimende” umgomo wethu waphakade; imikhiqizo yethu yamukelwe kahle hhayi emakethe yasekhaya kuphela kepha nasezimakethe eziningi zaphesheya emhlabeni jikelele.
2). Ifektri yethu, ilawula ngokuqinile zonke izinyathelo zokukhiqiza, ikhwalithi yokulawula engcono nesikhathi sokulethwa
Sinesibalo esikhulu seminyaka yobuchwepheshe besipiliyoni sobunjiniyela, sigxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukuhlinzeka zonke izidingo zamakhasimende.
Ukulawula okuqinile kuzo zonke izinyathelo zokukhiqiza, ukulawula kangcono ikhwalithi nesikhathi sokulethwa.
Kumahhala kuzisekelo zeSampuli ezikhona ngenani lazo, isikhathi sokusampula lusuku olulodwa oluthandekayo. Amakhasimende akhokhela imali ekhokhwayo Imali yesampula izobuyiselwa emuva kokuthi uthenge i-oda lokuqala.
Inkampani yethu inikeza imikhiqizo ehlome kahle, amasu athuthukile, amandla oqinile wezobuchwepheshe, futhi singenza ukwenziwa kwezinye izingxenye ezikhethekile.